ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): December 2017
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:58 PM0comments Links to this post
အဲဒီလိုနေလာရင်းနဲ့ပဲ နှစ်ကာလတွေ ဆက်လက်ရွေ့လျားသွားခဲ့ပါပြီ။ အားနက်စ်ရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်ဖြူတွေ ပေါက်လာပြီး နဖူးမှာလည်း အရေတွေဟာ တွန့်လို့ ပါးပြင်တွေပေါ်မှာလည်း အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ဖြစ်လာပြီ။ သူဟာ လူအိုတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် အနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတဲ့ လူအိုတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ ဆံပင်ဖြူအရေအတွက်တွေနဲ့အမျှကို သူ့စိတ်ထဲမှာ အသိအမြှော်အမြင်တွေ ဟာ ရှိနေခဲ့တယ်။
မထင်မရှားဘဝ မှာ သူနေလို့မရတော့ဘူး။ အများက လိုက်ရှာတွေ့ချင်နေရတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ လွင်ပြင်ဒေသ နယ်နမိတ်ကို ကျော်လွန်ပြီး သူဟာ ကျော်ကြားလာခဲ့တော့တယ်။ ကောလိပ်က ပါမောက္ခတွေ၊ မြို့ ကြီးပြကြီးက ထင်ရှားတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှား သူတွေကတောင် သူ့နဲ့တွေ့ဖို့၊ စကားပြောဖို့ အဝေးကလာခဲ့ကြရတယ်။ လာတွေ့သူတိုင်းကို အားနက်စ်က သိမ်မွေ့တဲ့ရိုးသားဖြူစင်မှုနဲ့သာ လက်ခံတွေ့ဆုံတယ်။ စိတ်ကူးထဲပေါ်လာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့စိတ်ထဲမှာ သို့မဟုတ် သူတို့စိတ်ထဲမှာ နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်ငြိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးပြောဆိုဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ချင်း စကားပြောနေကြချိန်မှာဆို ညနေခင်းရဲ့ မှိန်ဖျော့ဖျော့ရောင်ခြည်အောက်မှာ အားနက်စ်မျက်နှာဟာ တောက်ပလို့နေတတ်တယ်။ လာရောက်စကားပြောသူတို့အပေါ်မှာပါ မသိမသာ အလင်းရောင် ပေးထားသလိုမျိုးတောင် ရှိနေတတ်လေရဲ့။
အားနက်စ်အသက်အရွယ်ရလာချိန်မှာ ဘုရားသခင်က ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ကို ကမ္ဘာမြေအတွက် ဖန်ဆင်းပေးတော်မူခဲ့တယ်။ အဲဒီကဗျာဆရာက တကယ်က လွင်ပြင်ဒေသကပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ ချိုမြဂီတကိုအရင်းပြုရင်း ဘဝရဲ့ အချိန်ကာလ အများစုကို မြို့ ပြတွေမှာပဲ ဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးလိုက်ရသူဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူဟာ ဇာတိနဲ့ ဝေးနေပေမယ့် ကျောက်သားမျက်နှာကို မေ့မနေခဲ့ဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကို သူ့ရဲ့  ကဗျာတွေမှာ တခမ်းတနားထည့်ရေးတတ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
အဲဒီကဗျာဆရာရဲ့ ကျောက်သားမျက်နှာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ကဗျာ တေးသွားတွေဟာ သူတို့ဘာသာ အားနက်စ် ဆီ ကို ဆိုက်ရောက်လာတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ။ လုပ်နေကျ အလုပ်တွေနားချိန် သူ့တိုက်အိမ်လေးတံခါးနားက ခုံရှည်မှာ အားနက်စ်ဟာ ထိုင်လိုက်ရင်း အဲဒီကဗျာဆရာရဲ့ ကဗျာတွေကို သူဖတ်နေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကျောက်သားမျက်နှာကြီးရှိတဲ့နေရာဆီကို သူ့အကြည့်ကို ရွှေ့ လိုက်တယ်။
''ကျွန်တော့်ရဲ့မဟာသူငယ်ချင်းကြီးရေ '' … အားနက်စ်က ရေရွက်ရင်း ကျောက်သားမျက်နှာကြီးကို ပြောလိုက်တာက "ဒီကဗျာဆရာက ခင်ဗျားနဲ့ ဆင်မနေဘူးလားဗျာ" တဲ့။
ကျောက်သားမျက်နှာကြီးက ပြုံးယောင်ယောင်တော့ဖြစ်သွားပုံပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခွန်းမှတော့ ပြန်မဖြေခဲ့ဘူး။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:01 PM0comments Links to this post
အဲဒီလိုနဲ့ အဲဒီ အထင်ကရနိုင်ငံရေးသမား ရောက်လာတဲ့နေ့မှာ မြင်းသည်တော်တွေကလည်း လမ်းတလျှောက် မြူးမြူးကြွကြွလှမ်းလို့ ဖုန်တွေတောင်တထောင်းထောင်းထနေတော့တယ်။ တိမ်လိုထူထပ်တဲ့ ဖုန်ထုက မြင်ကွင်းကိုတောင် ကွယ်သွားတာမို့ တောင်တန်းတွေကိုတောင် အားနက်စ် အနေနဲ့ မမြင်ရလောက်အောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒေသရဲ့ လူကြီးလူကောင်းတွေကလည်း ကြိုဆိုတဲ့ လမ်းတလျှောက် နေရာယူထားပြီးပြီ။ စစ်သားတွေ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ ဒေသမှာရှိတဲ့ ရဲအရာရှိတွေ၊ သတင်းစာတိုက်က အယ်ဒီတာတွေပါမကျန်အောင် ကြိုဆိုနေကြတယ်။
အခုလိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာ သိပ်ကို တောက်ပ ခမ်းနား တင့်တယ် လှပလွန်းလှတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အဲဒီနိုင်ငံရေးသမားနဲ့ ကျောက်သားမျက်နှာကြီးတို့ရဲ့ ဆင်တူနေတဲ့ပုံတွေကို နှဖူးစည်းစာတမ်းတွေမှာပါ ရိုက်ပြီး လွှင့်တင်ထားကြတယ်။ အဲဒီပုံတွေအရတော့ သူတို့ နှစ်ဦးလုံး တူလိုက်တာ ညီရင်းအကိုတွေလို့တောင်ထင်ရတယ်။ အဲဒီလိုသာ အပြန်အလှန်ဆင်တူနေကြမယ်ဆိုရင် သိပ်ကို အံ့သြပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာပါပဲ။
ပြောပြဖို့ ကျန်နေသေးတာက တေးဂီတအဖွဲ့ပါသေးတယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်တယ်။ သူတို့တီးမှုတ်လိုက်တာတွေက ပဲ့တင်ထပ်လို့ တောင်တန်းတွေပါ မြူးပြီး၊ သံစဉ် အနိမ့်အမြင့်တွေကြားမှာ လွင်ပြင်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံး ကိုယ့်တေးသံကိုယ် ပြန်ရှာတွေ့ပြီး ကြားနေရသလို လှပကြည်နူးစရာကောင်းနေတော့တယ်။ ကျောက်သားမျက်နှာကြီးကိုယ်တိုင်ပါ တေးသွားမှာ လိုက်ပါ စီးမျောလို့ နေနေပုံပဲ။ တီးနေတဲ့ တေးသွားကလည်း တဘောင်စကားအတိုင်း ကျောက်သားမျက်နှာ နဲ့ တူသူဟာ ဒေသကိုရောက်လာမှာရယ်လို့ သီဆို တီးမှုတ်နေကြတာကိုး။
အဲဒီတခဏအတွင်းမှာပဲ လူတွေက သူတို့တွေရဲ့  ဦးထုပ်တွေကို မြှောက်ပင့်ရင်း၊ ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူစွာ အော်လိုက်သံတွေကြားရပါတော့တယ်။ သိလိုဇောနဲ့ ရင်တွေပါ ခုန်ရင်း၊ အားနက်စ် ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ဦးထုပ်ကို မြှောက်လို့ အော်ဟစ်ကြိုဆိုနေတယ်။ သူ့အသံက အကျယ်ဆုံး ဖြစ်လောက်ပါရဲ့။ " ဟေး မဟာလူသားကွ၊ လူတော်ကြီးကွ၊ ဟေး ကျောက်သားမျက်နှာရှင်ကြီး" လို့အော်နေရှာတယ်။ တကယ်က အဲဒီလူကို အားနက်စ် မတွေ့ရသေးပါဘူး။ အဲဒီခဏမှာတင် လူတစ်ယောက်က ပြောလိုက်သံ သူကြားလိုက်တယ်၊
"အဲဒီမှာဟေ့ သူပဲ" ။
"ကျောက်သားမျက်နှာရှင်ကြီး နဲ့ ကျောက်သားမျက်နှာတို့ ဆင်တူလိုက်ကြတာ"
အော်ဟစ်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာ မြင်းဖြူလေးကောင်ကတဲ့ မြင်းရထားတစ်စီးပေါ်လာတယ်။ မြင်းရထားပေါ်မှာတော့ အထင်ကရနိုင်ငံရေးသမား ကျောက်သားမျက်နှာရှင်ကြီးကိုယ်တိုင် စီးနင်းလိုက်ပါလာတယ်။
အားနက်စ် ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းတစ်ယောက်က " ကျောက်သားမျက်နှာကြီး နဲ့ တူတဲ့ သူ ကို နောက်ဆုံးတော့ တွေ့ခဲ့ပြီ" လို့ သူ့ကိုလှမ်းပြောနေတယ်။
အားနက်စ် လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နိုင်ငံရေးသမားရဲ့  ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဟာ ရဲရင့်မှုနှင့် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမှုစတဲ့ အင်မတန်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ကြန်အင်လက္ခဏာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် သူ့ စိတ်ထဲက အလွတ်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ ကျောက်သားမျက်နှာကြီးနဲ့တူဖို့မှာတော့ တစ်စုံတစ်ခု ချွတ်ယွင်းနေတယ်။ ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ဘူးလို့ မြင်မိတယ်။
"တူတယ်မဟုတ်လား၊ ဝန်ခံလိုက်။ သူသည်သာလျှင် ကျောက်သားမျက်နှာရဲ့ ပုံတူပဲ မဟုတ်လား။"
"မတူဘူး" ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ အားနက်စ် က ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
"ငါ မြင်တာကတော့ နည်းနည်းလေးတောင်မှမတူ၊ လုံးဝကို မတူဘူးကွယ်"
"အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျောက်သားမျက်နှာအတွက် သတင်းဆိုးပဲ" အားနက်စ်ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းက ပြောရင်း ကျောက်သားမျက်နှာရှင်ကြီး ကို ကြိုဆို ဝမ်းသာကြောင်း ဆက်လက်အော်သွားလေရဲ့။
အားနက်စ်ကတော့ လှည့်ပြန်လာခဲ့ပြီ။ သူအလွန်ပဲ ဝမ်းနည်းနေတယ်။ သူက တဘောင်စကားမှန်လာဖို့ကို မျှော်လင့်နေခဲ့တာမို့ အခုလို မပြေလည်မှုအတွက် သိပ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်သွား
တယ်။ ကြိုဆိုနေတဲ့ လူအုပ်တွေ၊ အလံတွေ၊ တေးဂီတတွေ၊ မြင်းရထားတွေ ထွက်ခွာသွားကြပြီမို့ ဖုန်မှုန့်တွေငြိမ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောက်သားမျက်နှာကြီး တဖန်ပြန်လို့ပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားကနေ အားနက်စ်ကို လှမ်းပြောသယောင် စိတ်ထဲထင်လိုက်ရတယ်။
"ဟေး အားနက်စ်ရေ။ ငါ ဒီမှာလေ" လို့ ခေါ်လိုက်လေသလားပဲ။
"မင်းစောင့်စားခဲ့ရတာထက်ကို ငါက ပိုစောင့်နေရတာပါကွာ။
ငါတောင်မှ စိတ်မပျက်သေးပါဘူးကွယ်။ ဘာမှစိတ်ပူပင်မနေပါနဲ့။ သူလာပါလိမ့်မယ်။"
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:08 PM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:12 PM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:14 PM0comments Links to this post
ဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်အမှန် ဆိုတာ .......
မင်းဘာသာ ပြန်အသိအမှတ်ပြုနိုင်တဲ့ အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်၊ .
အမှိုက်ပုံပေါ် မင်းကို ပစ်မတင်မီအချိန်ထိ
စိတ်အညစ်အကြေးတွေနဲ့ - အလိုမကျမူတွေနဲ့
မင်း ပျော်ရွှင်စေရေး အတွက် လုပ်ပေးပါတော့လားလို့
ညီးညူနေသူ ဖြစ်နေမယ့်အစားပေါ့ …။
ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်မျိုး ငါ့မှာ ရှိတယ်။
ငါ့ရဲ့ အထူးတလည် ရပိုင်ခွင့်ပဲ။
ငါ့ရှင်သန်ရှိနေမှုက အရာရောက်လေလေ ဖြစ်လို့ပဲ။
ငါဟာ နှစ်သက်နေနိုင်ပါတယ် …။
ငါ့အတွက်တော့ ဖယောင်းတိုင်တိုတိုလေး မဟုတ်ဘူး ။
သူဟာ အချိန်ကာလတစ်ခု အတွင်းမှာ
ထိန်ညီးနေတဲ့ မီးရူးတိုင်သာ ဖြစ်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ကို .....
ငါက လုပ်ပေးသွားချင်တယ် …
သူ့ကို ကမ်းမပေးခင် အထိပေါ့ ။
before you are thrown out on the scrap heap;
instead ofafeverish selfish little clod of ailments and grievances complaining that the world will not devote itself to making you happy.
and as long as I live, it is my privilege
Translated By: Shwe Sin Tun Yee
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:18 PM0comments Links to this post
စစ်သေနာပတိကြီး ရောက်လာမယ့်နေ့မှာ၊ အားနက်စ် ရော လွင်ပြင်ဒေသကြီးမှာရှိကြတဲ့ တခြားလူတွေရောဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်တွေကို ထားခဲ့ကြပြီး၊ တခမ်းတနားဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာကို ရှေးရှုသွားခဲ့ကြတယ်။ စစ်သားတွေကစောင့်ကြပ်၊ အလံတွေဝှေ့ယမ်းလို့၊ လူတွေက သောင်းသောင်းဖြဖြနှင့် အော်ဟစ်ကြိုဆိုနေခဲ့ကြတယ်။ သွေးမိုးကြိုးကြီး ရဲ့ မျက်နှာကို မြင်တွေ့ရဖို့ဆို အတော်လေးလှမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ အားနက်စ်က ရပ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ အသံတွေကိုကြားနေရတယ်။
"မျက်နှာက တစ်ထေရာတည်းပဲ။" လူတစ်ယောက်က ပျော်လွန်းလို့ ကခုန်ရင်း အော်ပြောလိုက်တယ်။
"အဲဒီအတိုင်းပဲဟေ့။ ဒါပဲလေ အံ့သြကြည်နူးစရာပဲ။" တဲ့ တစ်ယောက်က ပြန်ပြောတယ်။
တတိယတစ်ယောက်ကလည်း "ဘာလို့ မပျော်မရှိရမလဲ။" လို့ အော်ပြောနေတယ်။ "ဒီနေရာမှာရော၊ တခြားအနေအထားတွေမှာရော သူဟာ အကြီးကျယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးပဲ ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာကိုမရှိဘူး။"
နောက်ဆုံးမှာတော့ အားနက်စ်ဟာ စစ်သေနာပတိကြီးရဲ့ မျက်နှာကို တွေ
့လိုက်ရတယ်။ တပြိုင်တည်းအကြည့်မှာ သူဟာ ကျောက်သားမျက်နှာကြီးကိုပါ ဘေးအနေအထားကနေ မြင်နိုင်လိုက်တယ်။ လူအုပ်ကြီး ပြောနေကြသလိုမျိုး စစ်သေနာပတိကြီး နဲ့ ကျောက်သားမျက်နှာ ဆင်တူနေတယ်ဆိုရင်တော့ အားနက်စ် ကြည့်လိုက်ချိန်မှာကျ အဲဒါကို ဝန်ခံလိုက်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူဘူး ဖြစ်နေတယ်။
"အားနက်စ် ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့ " လို့ ကျောက်သားမျက်နှာကြီးက တိုးတိုးလေးကပ်ပြီး ပြောလိုက်သလိုမျိုး သူ့စိတ်က ပြောလိုက်တယ်။
"အားနက်စ် ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့။ သူ လာမှာပါကွယ်။"
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:22 PM0comments Links to this post
🔸 သမာဓိ 🔸
လေးပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာကို အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ လူငယ် လေးပစ်ချန်ပီယန်လေးဟာ တချိန်က လေးအတတ်နှင့် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ဇင်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကို သူနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စ်ိန်ခေါ်လိုက်တော့တယ်။
လူငယ်လေးသမားက အဝေးခပ်လှမ်းလှမ်းမှာရှိတဲ့ ပစ်ကွင်းအလယ်မှတ်နေရာကို သူ့ရဲ့ ပထမမြားတံနှင့် တည့်တည့်ထိမှန်အောင်ပစ်လိုက်ပြီး၊ နောက်မှ ထပ်ပစ်လိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဒုတိယမြားတံနှင့် ပထမပစ်ခဲ့တဲ့မြားတံကို ထပ်ခြမ်းခွဲပြလိုက်တယ်။
“ကဲ...။ ခင်ဗျားဒါကို ပြိုင်ပစ်နိုင်၊ မပစ်နိုင် ကြည့်ကြမယ်” လို့ ဇင်ကိုယ်တော်ကို ပြောလိုက်တယ်။
ဇင်ကိုယ်တော်ဟာ သူ့ရဲ့  လေးကို ဆွဲမထုတ်သေးပဲ လူငယ်ကို သူနှင့်အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ မျက်နှာရိပ်လှမ်းပြလိုက်ပြီး တောင်ကုန်းတစ်ခုဆီကို ထွက်သွားတယ်။ ဇင်ကိုယ်တော်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို အရမ်းသိချင်နေတဲ့လူငယ်လည်း သူ့နောက်ကနေလိုက်သွားလိုက်တာ တောင်ကုန်းမြင့်တစ်နေရာဆီကို ရောက်သွားကြတယ်။
အဲဒီနေရာမှာ နက်ရှိုင်းတဲ့ချောက်တစ်ခုရှိနေပြီး အဲဒီချောက်ရဲ့ အပေါ်မှာ သေးငယ်ပြီး ခနော်ခနဲ့နိုင်တဲ့ သစ်သားချောင်းတွေနဲ့ တံတားလေးခင်းထားတာရှိတယ်။ ဇင်ကိုယ်တော်ဟာ ဒီလှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တံတားရဲ့  အလယ်ခေါင်နေရာရောက်တဲ့အထိ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ လှမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ ပြီးမှ အဝေးတစ်နေရာမှာ ရှိတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို ပစ်မှတ်ထားလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ လေးနဲ့မြားကို ထုတ်လို့ ပစ်မှတ်ဆီချိန်ကာ အတိအကျတစ်ချက်တည်း လှမ်းပစ်လိုက်တယ်။
“ကဲ... အခု မင်းအလှည့်”
သူကလူငယ်ကို လှမ်းပြောလိုက်ရင်း တံတားအလယ်ကနေ မြေပြင်ဆီကို စိတ်အေးလက်အေးပဲ ပြန်ဆင်းလာလိုက်တယ်။
အောက်ခြေမြေကြီးကို လှမ်းကြည့်ရင်တောင် မမြင်ရတဲ့ အသူတစ်ရာနက်တဲ့ ချောက်ကို ကြည့်ရင်း လူငယ်ဟာ လေးပစ်ဖို့နေနေသာသာ တံတားပေါ်ကိုတောင် မတက်ရဲဘူးဖြစ်နေရှာတယ်။
အကျပ်ရိုက်နေရှာတဲ့ စိန်ခေါ်သူလူငယ်ချုန်ပီယံကို လှမ်းကြည့်ရင်း ဇင်ကိုယ်တော်က လှမ်းပြောလိုက်တယ်။
“မင်းက လေးအတတ်မှာတော့ အတော်ကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေးထုက်ပြီး မပစ်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ စိတ်အကျပ်အတည်းအတွက်ကျတော့ မင်းမှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မူ အတော်နည်းသကိုးကွ။”
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:25 PM0comments Links to this post